Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Miralem Pjanic Child Story Story Na-emeghe Ihe Nkọwa
LB na-akọ akụkọ zuru ezu nke Football Genius nke kacha mma mara aha ya "Onye na-eme ihe nkiri". Ọrụ Miralem Pjanic Anyị na-akọ akụkọ akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ezi omume ya, ehulata na-enyefe onwe ya, nakwa ka ọ na-esi n'aka ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ewere Miralem Pjanić's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Miralem Pjanic Child Story Story Na -Ndụ mbido
Miralem Pjanić mụrụ na 2nd ụbọchị nke April 1990 na Tuzla, SFR Yugoslavia ugbu a mara dị ka Bosnia na Herzegovina. A mụrụ ya nna ya, Fahrudin Pjanić (onye na-agba ụta nke atọ na-arụ ọrụ ọzọ Job) na nne ya, Fatima Pjanić (nwunye nwanyị mgbe a mụrụ Miralem).
Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, a mụrụ Miralem, ezinụlọ ya kwagara Luxembourg na-achọ ebe ịta nri ndị na-acha ahịhịa ndụ, nke na-emecha bụrụ mkpebi dị mkpa nke chebere ndụ ezinụlọ dị ka ebe a mụrụ ya ọnwa ole na ole ha hapụrụ, jidere ha n'agha nke hụrụ ọnwụ nke ndụ na mbibi nke Njirimara.
Mgbe ha nọ na Luxembourg, ha nọ na-eme njem, Fahrudin Pjanić nọgidere na-akpọ bọlbụ ma na-ewere akụkụ Job dịka onye ọrụ mmepụta ihe. O mekwara ka Miralem na-eto eto soro ya gaa n'inye ọzụzụ iji mara ya n'egwuregwu football, na-ekwenye na nwa ya nwoke nwere ike ịga nke ọma na egwuregwu ahụ.
Ihe Fahrudin kwenyere abụghị ihe okwukwe okwukwe siri ike ma ọ bụ ihe omume ọ hụrụ mgbe otu ụbọchị ezumike ha si Luxembourg gaa Bosnia. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị Fahrudi ga-echeta na:
Nwa na-eto eto Miralem agaghị echefu ohere ịgba egwu, karịsịa n'oge ezumike anyị site na Luxembourg na Bosnia mgbe ọ na-enwechaghị nchegbu gbasara agụmakwụkwọ. Ọ na-etinye ọtụtụ awa n'egwuregwu egwuregwu.
N'ikwu okwu n'ihu, o kesara ihe ọ ga-eche iji cheta dị ka nchọpụta na-awụ akpata oyi n'ahụ banyere mmasi nke Miralem maka football
E nwere njem a nke mere ka anyị rute n'abalị ma na-atụ anya na ọ ga-arahụ ụra naanị ka ụda ụda na-ama jijiji site na ụgbọala. Mụ na nna m na-aga n'ụlọ ụgbọala na-atụ anya ịmata ndị ohi. Mana anyi choputara na Mirlem na eme.
N'oge na-adịghị anya Miralem (agadi 7) debanyere aha na otu ìgwè nke mbụ na Luxembourg, FC Schifflange 95 ebe o gosipụtara onwe ya dị ka ihe mgbagwoju anya nke talent na ịrụsi ọrụ ike, ọnụnọ zuru okè na-adịkarịghị egosi site na mmalite bọlbụ.
Miralem Pjanic Child Story Story Na -Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Ọ bụ na FC Schifflange na Miralem tinyere ihe ngosi dị egwu nke mere ka ndị scouts si n'ọtụtụ Belgian, Dutch na German clubs. Nna ya na-eduzi ya site na onye nkụzi nke mbụ na Luxembourg, Guy Hellers. Miralem wee kwadoro maka ụlọ ọrụ French, FC Metz.
Miralem, onye dị na nwata na FC Metz weere na ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe mgbochi mpempe akwụkwọ. N'ihi ya, ọ na-arụ ọrụ iji gbagoo ndị ntorobịa klọb ruo mgbe o nwetara nkwalite n'ebe ndị òtù egwuregwu mbụ nọ ma mee ka ọ bụrụ mmalite mgbe ọ dị afọ asaa.
Miralem Pjanic Child Story Story Na -Bilie Iji Mara Aha
N'ịbụ onye guzobere onwe ya na FC Metz mbụ, Miralem hapụrụ Lyon ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ maka ụlọ ọrụ ahụ hụrụ Real Madrid kụrụ aka na 2009 / 2010 Champions League na Bernabeu.
O nyekwaara ya aka iru na ngwụcha nke otu mkpọsa ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ kwagara Roma na 2011 ebe o guzobere onwe ya dịka onye na-ahụkarị na Midia na Italia. Tupu ya erute Juventus Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Miralem Pjanic Child Story Story Na -Ndụ mmekọrịta
Miralem Pjanic anọwo na enyi ya nwanyị, bụ Josepha onye si Nice, France. Mmekọrịta ha mere nwa nwoke, bụ Edin onye a mụrụ na 2014.
N'oge ụfọdụ na 2013, e nwere akụkọ banyere ya na-ahapụ Josepha maka onye nta akụkọ sexy, Giorgia Rossi onye ọ malitere ịlụ na Milan. Otú ọ dị, e nwebeghị ikikere ndị ahụ dị ka Miralem mere ka mmekọrịta ya na Josepha laghachi azụ.
Dịka n'oge a, a maara ntakịrị banyere mmekọrịta Miralem na ọfụma ọhụrụ ya bụ Francesca.
Miralem Pjanic Child Story Story Na -Okpukpe na Mmụta
N'ihe metụtara okpukpe, Miralem Pyanich na - akọwa dịka Muslim. Ọnọdụ ndị okpukpe ya bụ ndị ọbịa nke Ịtali na-anabata ya, n'agbanyeghị na ha bụ ndị Katọlik bụ ndị a ma ama maka nnwere onwe okpukpe ha.
Ihe kwesiri ekwuru bu eziokwu na Miralem emeela ka o jiri aka ya ghota akwukwo egwuregwu na akwukwo nke aru na Mahadum Sarajevo. Ụzọ na-esighị ike na-agba ụkwụ site na football football.
Miralem Pjanic Child Story Story Na -Eziokwu ahụ
Miralem Pjanić akọwawo ọtụtụ ndị na-arụsi ọrụ ike bụ àgwà kachasị nke ọrụ ya.
Na anụ ahụ, o nwere elu nke 1.78m, anya hazel ma na-ahụkarị ajị ajị agba site na ahịhịa ọka na-acha.
Iji buru ya nile, Bosnian bụ polyglot na-asụ ma ọ dịkarịa ala asụsụ ise: Bekee, Ịtali, German, French na Luxembourg, mana ihe ijuanya adịghị asụ asụsụ Bosnian ya.
Miralem Pjanic Child Story Story Na -Ebumnuche kpatara aha njirimara
Pjanic n'ihi na ya na-emepụta ihe na-ejikwa bọl ahụ bụ "The Painter". Onye Midfielder nwere ọkachamara n'ịmepụta enyemaka nke hụrụ na ọ na - abụ onye nkwado dị elu na Serie A maka oge abụọ gara aga.
N'ezie, ụbụrụ Brazil nke mbụ bụ Juninho kọwara ya, na 2015, dịka onye na-agba chaa chaa kacha mma n'ụwa.
"2Mire nwere àgwà dị oke mma. Ọ bụ ma eleghị anya onye kacha mma na-agba chaa chaa n'ụwa taa. Enweghị m n'aka na - ọ bụ ya kacha mma ".
Miralem Pjanic Child Story Story Na -Socia Media Ọrụ
Miralem Pjanić nwere ike na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ndụ dị ka egosipụtara site na-eme mkpọtụ na ya mgbasa ozi mgbasa ozi aka. Malite na Twitter, football star has over 371 followers and its tweets mostly work based.
A pụkwara ikwu otu ihe banyere ya facebook peeji nke ebe o nwere nso otu nde ụmụazụ yana Instagram ebe o nwere ihe karịrị 2 nde ndị na-eso ụzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Miralem Pjanić nwa ya na akụkọ ya. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!